မိုးဆွေငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
မိုးစွေငှက်သည် မိုးစာငှက်နှင့် အသွင်အပြင်ချင်း တူ သော်လည်း ကိုယ်အနေအထား တည်ဆောက်ထားပုံချင်းမှာ အလွန်ကွဲပြားသည့်ပြင် မျိုးစဉ်နှင့် မျိုးရင်းချင်းလည်း မတူကြ ချေ။ မိုးစွေငှက်သည် "ပက်ဆာရီဖောမီး" မျိုးစဉ်နှင့် "ဟီရန်ဒီဒီဒီး" မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်၍ ပါဏဗေဒအမည်မှာ "ဟီရန်ဒို ရတ်စတစ် ကား ဂရတ်တူရာလစ်" ဖြစ်သည်။ မိုးစွေငှက်သည် ပျံသန်းနေ စဉ် တောင်ပံကို တစ်ခါတစ်ခါအနည်းငယ် ပိတ်၍ ပိတ်၍ ပျံ တတ်သော်လည်း မိုးစာငှက်ကား မည်သည့်အခါမျှ တောင်ပံကို မပိတ်ချေ။
မိုးစွေငှက်၏အလျားမှာ အမြီးမွှေးကိုလိုက်၍ ၈ လက်မ အထိ ရှိသည်။ အမြီးမွှေးသည် အမှန်မရှိဘဲ ၂ ၁/၂ လက်မမှ ၅ လက်မအထိ ရှိတတ်သည်။ ပျံသန်းနေစဉ် နဖူး၊ မေးနှင့် လည်ချောင်းမွှေးတို့၏အရောင်သည် အနည်းငယ်မည်းသယောင် ယောင်ဖြစ်သည်။ ရင်ပတ်မွှေးကား ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်၏။ အမြီး၌ရှိသော အဖြူစက်များကို အမြီးအစွမ်းကုန်ဖြန့်လိုက်သည့် အခါမှသာမြင်ရသည်။
မိုးစွေငှက်သည် ပျံသန်းသည့်အခါတွင် ခပ်မှန်မှန်အော် တတ်၍ အသံနှစ်ဆင့်ထွက်ရာ ဒုတိယအသံက ပို၍ကျယ်သည်။ ထိတ်လန့်သည့်အခါ၌ ဖြစ်စေ၊ အနှောင့်အယှက်ပြုသည့်အခါ၌ ဖြစ်စေ စူးစူးရှရှ အသံကုန်အော်တတ်သည်။ မိုးစွေငှက်သည် အစုအအုပ်နှင့်နေ၍ အမြဲတမ်းပျံသန်း နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မြေပေါ်တွင် နားနေသည်ကိုတွေ့ရခဲ သည်။ လယ်ကွင်းများနှင့် ရေပြင်ပေါ်တွင် ပျံသန်းယင်း ပိုးမွှား များကို ဖမ်းယူစားတတ်သည်။ ရေပေါ်တွင် ကပ်၍ပျံယင်း ရေပေါ်ရှိ ပိုးမွှားများကို ဖမ်းယူတတ်သည်။ ရေကိုလည်းစုပ်ယူ တတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ကြေးနန်းကြိုး၊ အဆောက်အအုံ၊ တံတားနှင့် သစ်ပင်များပေါ်တွင် နားနေလေ့ရှိသည်။ ပျံသန်းရာ တွင် အခြားငှက်များထက် လျင်မြန်စွာ ဤမှ ထိုမှ လူးလာ ပျံသန်းနိုင်သည်။ မြစ်ကြီးများ၏ သဲသောင်ပြင်များတွင် အစု အအုပ်နှင့် အိပ်တတ်ကြသည်။
မိုးစွေငှက်အမျိုးမျိုးရှိရာအချို့သည်ဒေသပြောင်းရွှေ့တတ် သည်။ ရခိုင်တိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်နှင့် အလယ်ပိုင်း ဒေသများ၊ တောင်ပိုင်းရှိ ကွင်းများ၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းနှင့် ကယားပြည်နယ်များတွင် မိုးစွေငှက်များကို အများအပြားတွေ့ရ သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Hirundo rustica". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
↑ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၉၀/၂၀၂၀
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုးဆွေငှက်&oldid=713531" မှ ရယူရန်
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။